Izibulele ebulale uyise, intombi nowayengunkosikazi | News24
LAST UPDATED: 2019-06-16, 16:52
Izibulele ebulale uyise, intombi nowayengunkosikazi
Tallahassee - Indoda yaseFlorida ibulale owayengukayo, intombi nobaba wayo ngaphambi kokuzidubula izibualale ekhaya ngoLwesibili, kusho amaphoyia.
Amaphoyisa iSwat athola isidumbu sikaMurray Lancaster, 41, eduzane naseGreen Cove Springs ngesikhathi emthungatha aphinde athola isidumbu entombi yakhe uValorie Short, 30, nobaba wakhe uWaylin Buddy Shot, 55, nowayengumkakhe u-Erica Green, 31, kusho owamaphoyisa aseClay County Rick Beseler.
OLUNYE UDABA: Uzibulele obesaba induku kanina
Amaphoyisa athi lesi sigameko sokuzibulala siqale ngokuthi uLancaster athumbe intombi yakhe eyikhombe ngesibhamu eyithatha ngenkani emsebenzini wayo iKeeping It Classy hair salon ngezithuba zabo-09:45ekuseni. UJames Thigpen osebenza kamakhelwane nendawo yokucwala izinywele wababona bengena emotweni yohlobo lweChevrolet.
"Ngesikhathi emfaka emotweni wamshaya ekhanda ukuze ezongena emotweni njengoba ayengafuni," kusho uThigpen, kubika inydailynews.